I-Dell EMC yeHlabathi: Imigaqo eli-10 yokuTshintsha iTekhnoloji yoLwazi | Martech Zone
Wow, zeziphi iiveki ezimbalwa! Ukuba uqaphele ukuba andibhalanga rhoqo, kungenxa yokuba ndenze uhambo olunye Dell EMC yeHlabathi Apho mna noMark Schaefer safumana ilungelo lodliwanondlebe lobunkokeli kwiinkampani zeDell Technology zazo Izibane zepodcast. Ukubeka le ngqungquthela kwindawo efanelekileyo, bendihamba iikhilomitha ezi-4.8 kusuku lokuqala kwaye ndilinganisela iimayile ezi-3 yonke imihla emva… kwaye oko kukuthatha ukuphumla rhoqo kunye nokufumana iimbombo zokwenza umsebenzi othile. Ndingahamba kabini loo mgama kodwa ndaphoswa ngumxholo kunye neenkcazo-ntetho.
Ngelixa inkomfa yayijolise kwitekhnoloji, kunyanzelekile ukuba itekhnoloji yokuthengisa ikubone okuzayo kulwazi lwetekhnoloji yolwazi. Iinkampani sele zixhomekeke kwitekhnoloji phantse kuyo yonke imiba yeshishini labo- kwaye ikamva lizisa amandla okuguqula yonke eminye imiba.
Ngaphambi kokujonga ezinye zamagama, kunyanzelekile ukuba uqonde ukuba yintoni Inguqulelo ye-IT ichazwa njenge kunye nokuba iinkampani zingazivavanya njani ezazo inguqu kwimatrity.
Ukuguqula i-IT yakho kuqala ngokulungisa indlela yombutho wakho kwiziseko zophuhliso. KUFUNEKA kucatshangelwe njengamandla okuqhuba ukufezekisa iinjongo zeshishini, hayi ukugcinwa kunye nokugcinwa kwezibane. Iziko ledatha lale mihla lenzelwe ukukhawulezisa iziphumo.
Ngamanye amagama, sonke siba iteknoloji iinkampani. Kwaye ezo nkampani ziphucula amaqonga azo, ziqesha abasebenzi abafanelekileyo, kwaye ziqinisekisa ukhuseleko zingundoqo ziyaqonda ukonga okukhethekileyo okuvula uhlahlo-lwabiwo mali olusungula iimveliso kunye neenkonzo zabo. Nantsi eminye yemigaqo ekufuneka uqale uyiqonde kwaye ucinge ngendlela abaza kuyitshintsha ngayo inkampani kunye nokulindelwe ngabathengi bakho kwixa elizayo.
Convergence -Iziseko zophuhliso eziguqulweyo (i-CI) zidibanisa imiba ephambili yeziko ledatha- ikhompyuter, ukugcinwa, uthungelwano kunye nokubonwa. Akusekho luqwalaselo lomntu ngamnye, liqonga nje elinokulinganiswa ngokulula ngeziphumo zokusebenza ezilindelekileyo.
Ukudibana kwehyper -Udibanisa ngokuqinileyo ezi zinto zine, ukunciphisa isidingo sobungcali kunye nokudityaniswa kunye nokunciphisa kakhulu umngcipheko weempazamo okanye ixesha lokuphumla.
Ukutshintsha -Ngelixa iinkqubo ezibonisiweyo sele zihleli amashumi amabini eminyaka, amandla okwenza ubuchule kwiinkqubo zonke sele elapha. Iinkampani sele ziphuhliswa kwindawo zasekuhlaleni okanye ezihleliweyo ezihanjiswa kwimveliso xa kufuneka njalo. Isoftware yokwenziwa kwezinto iya kufuna uhlengahlengiso oluncinci kunye nokumbalwa kwaye iya kuba nobukrelekrele ngakumbi njengoko ibeka iliso kwaye isabela kwiimfuno.
Inkumbulo engapheliyo Ikhompyuter yanamhlanje ixhomekeke kugcino olunzima kunye nememori, kunye nokubala okuhambisa idatha ngapha nangapha. Imemori engapheliyo iguqula ikhompyuter ngokugcina kwimemori apho inokubalwa khona. Iinkqubo zokusebenza kweseva ziya kulungiswa ziqonda ukuphindeka kabini ukuya kwishumi kwisantya seeseva zayizolo.
Ukhomyutha yamafu -Sivame ukujonga ilifu njengento ethe ngqo kwisoftware yethu, ukugcinwa kwethu, okanye iinkqubo zethu zokugcina ezifumaneka kumaziko edatha. Nangona kunjalo, ilifu Ikamva linokuba nobukrelekrele kwaye libandakanye ngaphakathi endlwini, ngaphandle-okufutshane, okanye kwimveliso yamafu kuyo yonke indawo.
Kukubhadla okungeyonyani Ngelixa abathengisi beqonda i-AI njengesakhono sesoftware Ndicinga kwaye ivelise isoftware yayo. Ngelixa oko kuvakala kusoyikisa, kuyonwabisa ngokwenene. I-AI iya kubonelela ngethuba lolwakhiwo lwe-IT ukukala, ukunciphisa iindleko, kunye nokulungisa imiba ngaphandle kongenelelo.
Ukusetyenziswa koLwimi lweNdalo -Iinkampani ezinje ngeAmazon, uGoogle, iMicrosoft, kunye neSiri ziqhubela phambili i-NLP kunye nokubanakho kweenkqubo zokuphendula nokuphendula kwimiyalelo elula. Kodwa ukuya phambili, ezi nkqubo ziya kuguqula kwaye ziphendule ngobukrelekrele (okanye mhlawumbi zibengcono) kunabantu.
Ikhompyutha eluncedo -Xa ufaka iplagi, awucingi ngemfuno, igridi, amandla, okanye i-backups eziyimfuneko ukuqinisekisa amandla kwifowuni yakho. Olu lukhokelo lwezixhobo zethu eziphathwayo, iilaptops zethu, kunye nezixhobo zethu zeseva. Ngeendlela ezininzi, sele silapho kodwa iya isiba yinyani.
Eyona Mixed - amandla eekhompyuter esixoxa ngawo apha ayaqhubeka nokukala ngaphezulu kwayo nayiphi na into esakha sayicinga, isenza sikwazi ukogquma ilizwe elonyukisiweyo kwelokwenene. Ayizukude kakhulu kude kube ngoku ngaphambi kokuba sinxibelelane nehlabathi lethu elingaphaya kwe-iPhone okanye iiglasi zikaGoogle, kwaye sibe nezinto zokufakelwa ezinokulungelelaniswa ezidibanisa umhlaba wethu wokwenyani kunye nolwazi esiluqokelelayo ukuphucula bonke ubomi.
Internet Yezinto -Kunye neendleko zokuhla, ukuhla kwehardware, ukwanda kwebandwidth, kunye nekhompyuter iyinto eluncedo, i-IoT ikhula ngokungaguquguqukiyo. Njengokuba besithetha neengcali kwiDell Technologies, sifunde malunga neenzame ze-IoT kwezempilo, ezolimo, nangazo zonke ezinye izinto zobukho bethu.
Omnye umzekelo owawuchaziwe kukusetyenziswa kwe-IoT kunye nezolimo apho iinkomo zokuvelisa ubisi zazifakelwa izixhobo ezijonga ukutya ukutya kwazo kunye nesondlo ukuze kuphuculwe ukujiya okuyimfuneko kwimveliso yetshizi. Eli linqanaba lokuyila nokusebenza ngokukuko esixoxa ngako kwezi teknoloji. Wowu!
Ayisiyiyo nayiphi na kwezi teknoloji eziqhubela phambili, yiyo indibaniselwano yazo zonke Ngokukhawuleza ukuya kwintengiso. Sibona ukunyuka kwetekhnoloji esingakhange sikubone oko kwasungulwa i-Intanethi kunye ne-eCommerce. Kwaye, njengalezo zinguquko, siza kujonga iinkampani ezininzi zibambe isabelo sentengiso ngokwamkelwa ngelixa abanye beshiyeka ngasemva. Abathengi bazokwamkela, baziqhelanise, kwaye balindele ukuba inkampani yakho ityalwe ngokupheleleyo kwitekhnoloji yokunceda amava abo kuhlobo lwakho.
Yonke inkampani iya kuba yinkampani yetekhnoloji.
Ukubhengezwa: Ndihlawulwe nguDell ukuba ndiye kwiDell EMC yeHlabathi kwaye ndisebenze kwiiPodcasts zeLuminaries. Nangona kunjalo, khange bancede ukubhala le posi kungathetha ukuba inkcazo yam icimile. Ndiyayithanda itekhnoloji, kodwa oko akuthethi nokuba ndiziqonda kakuhle zonke iinkalo zayo!
tags: aikukubhadla okungeyonyaniesizisebenzelayoukhomyutha yamafuukuhlanganadelldell emcdell umhlaba we-emci-genomicsIsiguquliyasebukhosi-nganiso edibeneyoUkulungiswa kolwimi lwendalonlpukuzingisainguquikhompyutha eluncedoubuchuleVMware